Hnin Phyu – AYA Bank
Author: Hnin Phyu
Posted on June 18, 2018 June 18, 2018 by Hnin Phyu
ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်းများ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ နှစ်သစ်ကူး ကုသိုလ်ဒါနအဖြစ် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်သွားရောက်ခဲ့ခြင်း
Posted on March 14, 2018 March 14, 2018 by Hnin Phyu
ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်း(၁၀ဝ)ဦးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ဗုဒ္ဓဂါယာ (သံဝေဇနိယ (၄)ဌာန)သို့ ဘုရားဖူးခရီး သွားရောက်ခဲ့ရာ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်(ထွက်ခွာ)သို့ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသည့် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဇော်နှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ခင်မမတို့မှ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၏ ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ်သည် Anoma Travel Incentive ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သွားရောက် ခဲ့ပြီး (၆)ညအိပ် (၇)ရက်ခရီးအဖြစ် ရန်ကုန် – ဗုဒ္ဓဂါယာ – ရာဇဂြိုလ် – ဝေသာလီ – ကုသိနာရုံ – လုမ္ပနီ – သာဝတ္ထိ – ဗာရာဏသီမြို့များရှိ အထင်ကရနေရာများသို့ သွားရောက် လှည့်လည်[…]
၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လ (၁၁)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်(၈)နာရီမှမွန်းလွဲ(၁)နာရီခွဲအထိ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ၊ ဧရာတီဘဏ်ရုံးချုပ်၌ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဦးစီးတည်ထောင်သူ၊ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု Oxford ဆရာတော်၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အရှင်ဓမ္မသာမိ DPhil (Oxford)၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ ပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါလ ဓမ္မာစရိယ၊ ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မောဒယဓမ္မာစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ ၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှု နှင့် သတိပဌာန်အခြေခံကရုဏာ၊ Mindful Compassion and Resilience for Business တရားပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌဦးဇော်ဇော် အမှူးပြုသော ဝန်ထမ်းမိသားစုများက စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ သြဝါဒခံယူ ခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်က “ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတွေတတ်တတ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ အတွေ့အကြုံတွေရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ပဲ လေ့ကျင့်သင်ယူထားထား၊[…]
Posted on February 1, 2018 April 2, 2018 by Hnin Phyu
AYA Bank Introduces the Most Affordable Car-Buying Option
Posted on December 13, 2017 December 22, 2017 by Hnin Phyu
AYA Bank’s Automobile Hire-Purchase Loan Enables Customers to Buy Their Dream Cars with the Easiest and Convenient Financial plan AYA Bank ( Ayeyarwady Bank),atrusted partner for the people of Myanmar has announced that the bank has launched the most convenient automobile hire-purchase loan plan for any Myanmar citizen who is 20 years of[…]
AYA Bank will be holding 7thAnnual Blood Donation Ceremony in Celebration of the Bank’s7years Anniversary
Asatrusted partner of the banking industry for the people, AYA Bank is ready to hold its annual blood donation ceremony to fulfill its mission for continuous effort in saving hundreds of lives. The 7th annual blood donation ceremony will be held at Yangon region blood bank on 12 Aug 2017 and over 700[…]
With continuous effort to contribute to the society , AYA Bank has initiated regular Alms Donation of the Buddhist Lent to (50) Sanghas led by the Head Sayadawgyi of Mya Thein Tan monastery , U Jagara in front of their Kyauktada head office.The bank also aims for the convenience of those Sanghas collecting their alms[…]
AYA bank’s 7th years anniversary celebration
To celebrate the auspicious occasion of AYA bank’s 7th years anniversary, on 11 Aung 2017, with all the milestones and success, the bank associates paid an early morning visit to iconic Shwedagon Pagoda for cleaning and praying. And then, the bank associates donate daily alms donations to (50) Sanghas followed by lunch donations to (5)[…]
Posted on October 31, 2017 December 22, 2017 by Hnin Phyu